Wararka - Carwadii 126-aad ee Kanton
Aniga oo ku hadlaya magaca PETROKING PETROLEUM HEBEI CO., LTD, shan ka mid ah maamuleyaasheena iibka ayaa ka soo qayb galay carwada shanta maalmood ee Canton bishii Oktoobar 14th 2019 natiijooyin aad u wanaagsan oo ka muuqday bandhigan.
Macaamiisha booqatay bandhigeenu waxay ka kala socdeen India, Thailand, Vietnam, Russia Syria, South Korea, Taiwan, Japan, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Sudan, South Africa, Australia, Mongolia, Turkey, Saudi Arabia, Iraq, the Netherlands, Egypt iyo Talyaaniga, waxaan horumarineynaa ganacsiga aan la leenahay tobanka macaamiil ee dalalkan, waxaana ku guuleysaneynaa faa'iido wada jir ah iyo natiijooyin guuleysi leh.
Carwadan Canton waxaynu ku sii wadaynaa ballaadhinta howlaha adeegga iyo macnaha, hagaajinta tayada wax soo saarka, iyo dhisidda dufanka shirkadda caalamiga ah, waxaan siineynaa ciyaar buuxda doorka dhammaan baaxadda cabbirka ee furitaanka “iibinta iyo ka faa'iideysiga adduunka”, la safeeyay kaarka ganacsiga ee lagu sameeyo Shiinaha, ka caawiyo shirkadaha inay ka faa'iideystaan ​​kala duwanaanta suuqyada caalamiga ah, sameyaan tayo wanaagsan, qaabeeyaan si ka wanaagsan, kana shaqeeyaan alaabooyin xooggan oo adduunka gaadha.
Ka dib bandhigga, si aan u sii wanaajinno una kobcinno shirkadeena, waxaan soo koobnay tallaabooyin dheeri ah oo wax ku ool ah: ugu horreyn, waxaan sii wadi doonnaa inaan u hoggaansano tayo sare iyo tayo sare leh si aan ula kulanno baahiyaha macaamiisha kala duwan.Waxaan xayeysiineynaa oo aan dhiirrigelineynaa alaabteenna tayada sare leh. carwadan Canton, Dhiirrigelinta sumcadda ganacsiga, ballaadhinta saamaynta shirkadaha, samaynta macaamiil badan oo ogaada waxsoosaarkayaga iyo calaamadda oo ka iibinno alaabteenna adduunka oo dhan, waxaan ballaarin doonnaa baaxadda shirkadda oo waxaan ka dhigi doonnaa in badeecaddu ka beddesho faa'iidada qiimaha. xagga farsamada, heerka, sumadda, tayada, adeegga oo ah udub-dhexaadka faa iidada ballaaran Marka labaad, adeegga ugu wanaagsan ee loogu talagalay macaamiisha iskaashiga la leh. Hordhaca horumarinta ganacsiga oo aasaas u ah, dadaal loogu jiro u adeegidda macaamiisheenna. Ujeeddadeennu waa "macaamilku waa Ilaaheenna", tartanka toosan ee casriga ah, iyadoo la raacayo siyaasadda dhaqaalaha adduunka ee wada-faa'iidaysiga labada dhinacba, ma aha oo kaliya inaan fiiro gaar ah u yeelano tayada sare ee wax soo saarka, heerarka sare, waxaan fiiro gaar ah u leenahay qanacsanaanta macaamiisha. , Saamaynta iyo khibrada isticmaale, kaliya qanacsanaanta macaamilku waa asalka horumarka ganacsiga iyo badbaadada mudo dheer. Saddexaad, kor u qaad qaabdhismeedka shirkadda sii.Waxaa sii kordhaya horumarka joogtada ah ee shirkadda iyo tirada macaamiisha oo sii kordheysa, waxaan sii wadeynaa in aan is wanaajinno qaab dhismeedka iyada oo kor loo qaadayo horumarka shirkadda, si ay shirkaddu u gaarto iskaashi wanaagsan gudaha iyo dibedda, si iyada ay kor ugu qaaddo caalamiyeynta shirkadda.
Waxaan sidoo kale jeclaan lahayn inaan u mahadcelinno dhammaan shaqaalaha shirkadeena dadaalka wadajirka ah ee ay ugu jiraan sidii carwadan Canton ay u noqon lahayd guul dhammaystiran. Soo koobidtii tagtay iyo rajada mustaqbalka, waxaan u rajeynaynaa guul dheeri ah carwada soo socota ee Canton.